Mabhuku aEmilia Pardo Bazán, rwiyo kune zvakasikwa uye zvechikadzi. | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku naEmilia Pardo Bazán: Amai Chaiwo
"Emilia Pardo Bazán Libros" chave chimwe chekutsvaga kwakanyanya pawebhu mumwedzi ichangopfuura. Zvikonzero zvacho zvakawanda, asi hupfumi hunomiririrwa nemunyori wemabasa emunyori hwakatanhamara pakati pavo vese. Bazán aive mutapi venhau veSpanish, munyori, mukadzi, muturikiri, uye mupepeti. Muhupenyu hwake hwese akadzivirira kodzero dzevakadzi uye akavimbisa kuti vaive nebasa rinoremekedzwa munharaunda.
Munyori aive chikamu chevanokudzwa uye iyo Royal Galician Academy. Zita rake rekuti Countess waPardo Bazán akapihwa kwaari naMambo Alfonso XIII muna Chikumi 1908. Bazán akaburitsa zvese zvinyorwa uye zvinyorwa, mabhuku ekufambisa nemitambo. Mitsara yakakurumbira yemunyori inomirawo, yakanangana nekudzivirira kwevakadzi uye izere neanoyemurika huzivi uye nhetembo kudzika.
1 Mhuri uye hudiki
3 Hupenyu hwerudo
4 Kutanga kwebasa rake rekunyora
5 Pardo zvakasikwa
6 Zvematongerwo enyika uye zvechikadzi
7 Makore apfuura uye kufa
8 Emilia Pardo Bazán: Anowanikwa Mabhuku uye Excerpts
8.2 Mubvunzo unopisa
8.3 Amai hunhu
Mhuri uye hudiki
Pardo akaberekerwa muLa Coruña, guta riri muGalicia, munaGunyana 16, 1851. Akakurira mumhuri ine mbiri. Baba vake vaive José María Pardo Bazán y Mosquera, uyo aive nezita rekutanga kuverenga Pardo Bazán uye amai vake vainzi Amalia María de la Rúa Figueroa y Somoza.
Baba vake vaive murume ane mazano echikadzi uye akave nechokwadi chekuti Emilia aive nedzidzo yemhando yepamusoro. Mukukura kwake aigara achiverenga mabhuku aive nababa vake, ake aanofarira aive enganonyorwa uye zvinyorwa zvezvakaitika kare. Akadzidza muchikoro chakachengetedzwa neRoyal House uye achiri kuyaruka ane governesses.
Iye munyori aive mumwe wevakadzi vashoma venguva yake vakaramba kudzidza nezve zvemumba uye mimhanzi.. Akadzidza Chirungu, ChiFrench neGerman, baba vake neshamwari dzake dzakadzidza vakamudzidzisa sainzi nefilosofi nekuti zvidzidzo zveyunivhesiti zvairambidzwa zvevakadzi.
Muna 1868 akaroora mwana wemakore gumi nemapfumbamwe mudzidzi wezvemitemo ainzi José Quiroga y Pérez Deza. Gore rakatevera mushure mekuchata vakasarudza kutamira kuMadrid pamwe nababa vaEmilia, uyo aifanira kushandisa chinzvimbo chake seMutevedzeri weCortes. Muna 1871 vakaenda naPardo-Rúa vaviri kuItari neFrance.
Mune diary Kusasarura akaburitsa zvinyorwa zvake parwendo rwaakange aita nevabereki vake nemurume wake. Mukati meaya nhoroondo munyori akatsvaga kuratidza kuti mafambiro yaive nzira yakanakisa yekusimudzira fundo yemunhu. Akakurudzira kushanyira nzvimbo nyowani kamwe chete pagore.
Muna 1876 akaburitsa chinyorwa chake chekutanga chakanzi Yakakomba kudzidza yemabasa aBaba Feijoo izvo zvaakawana kuzivikanwa nekuyemurwa. Mugore iro mwanakomana wake Jaime akazvarwa uye akaburitsa muunganidzwa wenhetembo dzakapepetwa naFrancisco Giner de los Ríos uye wakatumidzwa zita rimwe chete rekuti mudiki wake.
Quote naEmila Pardo Bazán - Frasesgo.com.
Muna 1879 mwanasikana wake Blanca akazvarwa uye akaburitsa bhuku rake rekutanga Pascual López, nhoroondo yehupenyu hwemudzidzi wezvekurapa. Iri raive basa rakabudirira rakafumurwa ku Spain Magazini. Iyo nyaya yakaitika muSantiago de Compostela uye dingindira rayo raive rerudo nezwi rechokwadi.
Emilia yakabudiswa Honeymoon mu 1881, mune iri basa akazivisa kufarira kwake kuzvinhu zvakasikwa. Mugore iro mwanasikana wake Carmen akazvarwa uye akatanga kunyorerana nemunyori uye wezvematongerwo enyika Benito Pérez. Muna 1882 akakumbira dzidzo kuvakadzi veSpanish mune seminari yeFree Institution of Education.
Munyori wechiSpanish rakabudiswa muna 1882 Mubvunzo unopisa, bhuku rinotaridzirwa semusimudziri wezvakasikwa munyika yake. Raive basa rine nharo, rakapihwa zita rekuti hakuna Mwari uye zvinonyadzisira nekuti raive pamusoro pezvinyorwa zvaEmile Zola. Nekuda kweiyi gakava, murume wake akamukumbira kuti arege kunyora.
Pardo-Bazán akaenderera mberi nekugadzira mabasa, kusanganisira Mutungamiriri muna 1883 uye Mhandara Muna 1885, mune yekupedzisira iye akafuridzirwa nezvinetso zvewanano uye zvakazotevera kuparadzana nemurume wake José. Muna 1886 akaburitsa The pazos de Ulloa, uye muna 1887 munyori akaburitsa Amai hunhu uye akatanga kuenda kure neakasikwa.
Zvematongerwo enyika uye zvechikadzi
Zvematongerwo enyika venhau uye kurwira kwake kudzivirira kodzero dzevakadzi zvakamupa kuzivikanwa kukuru. Akapa hurukuro pazviitiko zvakasiyana uye varume vazhinji venguva yacho vainzwa kutyisidzirwa nematarenda ake. Muna 1890 akaburitsa Spanish mukadzi uye akaziva nezvekufa kwababa vake. Uku kurasikirwa kwakaswededza Emilia padhuze kune chiratidzo uye zvemweya.
Nenhaka yababa vake akagadzira iyo yezvematongerwo enyika nemagariro magazini Nyowani Yakakomba Theatre. Muna 1892 akarambwa paakaedza kuve chikamu cheRoyal Spanish Academy uye muna 1906 akazove mukadzi wekutanga kutungamira dhipatimendi remabhuku eAtenea de Madrid tsika yemagariro. Zvinonzi pane imwe nguva muhupenyu hwake munyori aive nerusaruro uye kupokana nemaSemite mazano.
Muna 1916 akakwanisa kudzidzisa zvidzidzo zveNeo-Latin mabhuku, achiva purofesa wekutanga wechigaro icho kuCentral University yeMadrid. Emilia akafa musi waMay 12, 1921 muguta guru reSpain. Ruzivo rwake rwekutanga Zvinokuvaraidza zvine njodzi uye mamwe emabhuku ake ekufambisa akaburitswa mushure mekufa.
Munyori Emilia Pardo Bazán.
Emilia Pardo Bazán: Anowanikwa Mabhuku uye Excerpts
Heano zvidimbu zvemamwe emabasa emunyori wechiSpanish:
"Sezvo pasina kazhinji mwaka yevarombo, Amparo anga aine sutu yetart, asi akaora zvakanyanya, uye jira rakatsvuka rakaipisisa ndiro chete rairatidza kuchinja kubva muchirimo kusvika kuchando ...
“… Kunyangwe hazvo zvipfeko zvidiki zvakadaro, handizive kuti ruva ripi rekuyaruka rakatanga kuratidza pamunhu wake; ganda reganda rake rakanga rakareruka uye rakaonda, maziso ake matema aipenya ”.
“Sekufumura kuri kuita Zola, zvinotambura nekukwezva kwehunhu izvo zvatinoziva kare. Mimwe yemitemo yayo ndeye mibairo mikuru yeunyanzvi; asi pane zvakasikwa, zvinoonekwa seboka redzidziso, muganho ...
"... Hunhu hwakavharwa uye hwakasarudzika hwandisingakwanise kutsanangura kunze kwekungoti unofanana nedzimba dzakadzika dzakadzika uye diki kwazvo, umo kufema kunonetsa. Kuti usanyure, unofanirwa kuvhura hwindo: rega mhepo itenderere uye mwenje kubva kudenga upinde ”.
“Pasi pemuti vaviri ava vakatizira. Wakave wakanaka muti wemu chestnut, une hukuru uye hukuru hukuru, yakavhurwa neinenge yekuvakisa pombi pane yakafara uye yakasimba mbiru ye trunk, iyo yaiita senge inotanga nekuzvitutumadza yakananga kumatenga akasunungurwa: muti wemadzitateguru, rudzi rwunoona mazera embugugs. kubudirira nekusava nehanya nekusava nehanya, hove, masvosve nemaruva, uye zvivape mucheche uye guva muzvitadzo zvehuku ravo rakatsemuka ".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Emilia Pardo Bazán: akasarudzika mabhuku uye hupenyu hwake